Fanatanjahantena avolenta – Haka tahaka ny Insep Frantsa ny foibe nampanantenain’i Andry Rajoelina - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fanatanjahantena avolenta – Haka tahaka ny Insep Frantsa ny foibe nampanantenain’i Andry Rajoelina
«Hotsaroanareo aho rehefa vita izany»! Miezaka ho tena mpiahy ny fanatanjahantena i Andry Rajoelina, filohan’ny tetezamita, nandritra ny famelabelarana ny mety ho endriky ny foibe nasionaly ho an’ny fanatanjahantena matihanina kasainy hatsangana eto amintsika, teny Ambohitsorohitra, omaly. Tetikasa hahatonga ireo atleta ho matihanina ity hotontosaina ity ary nambarany fa “haka tahaka ny Insep any Frantsa izany”.
Toerana telo no hisafidianana hanaovana izany, saingy mbola noraisiny ho tsiambaratelo aloha hatreto. Teknisianina isan’ireo namolavola ny Insep Frantsa rahateo,i Michel Godard no namelabelatra teo imason’ireo filohana federasiona voaasa teny an-toerana ny mombamomba io foibe io, izay ho voalohany aty Afrika. “Tsy fanatanjahantena irery anefa no hatao ao fa hiaraka amin’ny fianarana”, hoy ity manam-pahaizana manokana frantsay avy any amin’ny Insep Frantsa ity.
Isan’ireo efa niofana tany amin’ny Insep Frantsa ry Hubert Rakotombelontsoa sy Rabenala Toussaint ary Nicole Ramalalanirina, izay kalaza teo amin’ny atletisma fahiny. “Hita ao avokoa ireo taranjam-panatanjahantena rehetra ataon’ny Frantsay. Raha tanteraka izany dia heverina fa hanana ny lazany maneran-tany i Madagasikara”, hoy i Hubert Rakotombelontsoa, isan’ny tazana teny Ambohitsorohitra.
Raha ho an-dry zareo Frantsay dia isan’ireo kalaza frantsay nivoaka tao amin’ny Insep Frantsa ry Tony Parker, izay mpilalao basket milalao any amin’ny NBA.
“Hetra alaina avy amin’ireo orinasa tahaka ny efa alaina amin’ny sigara sy ny toaka no hoentina hampihodinana ity foibe nasionaly hamoahana atleta matihanina ity”, hoy ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina.
Mpanoratra Rijakely, 11.01.2013, 18:47	FIARAHAMONINA